Warbixin: Yaa gar leh, Yaase gar daran Wasaaradda Caafimaadka DF iyo Gobolka Banaadir? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jul 7, 2019
Isla khamiistii, mas’uul sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah oo aan dooneyn in magaciisa la xuso, lana hadlay Idaacadda Goobjoog ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay tilaabada gobolka Banaadir isaga oo intaa raaciyey iney tahay garab marid lagu sameeyey howlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federalka ah, sharci-darro ah, halisna ku tahay nidaamka caafimaadka Soomaaliya.
“Buuggaas wasaaradda caafimaadka kama warqabto, talaal aan shahaado dowladeed wadinin sidee loo hirgelinayaa, dadka yaa kontoroolaya, yaase baaraya, oo xaqiijinaya caafimaadkooda, shahaadana bixinaya, arrintan waa khatar, waana mid ka hor imaaneysa nidaamka caafimaadka dalka”. Ayuu intaasi raaciyey.
Khubaro caafimaadka oo la hadlay Idaacadda Goobjoog waxaa ay qabaan in talada caafimaadka dalka talaal iyo dawaba laga rabo iney kontoroosho wasaaradda caafimaadka, isla markaana aan looga maarmin iyadana ay muhiim tahay in la shaqeyso gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada.
Farmaajo oo dalab culus hor dhigay u qaybsamaha dhanka taageerada howlgalada ee Xoghayaha QM